Asemaqaqasini olunothile edonsela nge ubuhle bayo zalabo ungathandi ukuba lo muzi bangcolile. Abayithandayo kwalesi sigodi onqenqemeni khona phakathi moviegoers. Amateyipu esingu ezindaweni avumele ukuba shí izinkinga ebalingisi isizinda charm yemvelo. Kuyini ifilimu yesiteleka kakhulu mayelana emzaneni? Comedy kanye melodrama - izinhlobo ezivamile kulesi siqondiso. Kulesi sihloko sizogxila owokuqala.
Lapho inhliziyo ukuqaqamba
Edolobhaneni elincane anegama elihle uhlala sobudala oneminyaka engu-80 ubudala, umhlanganyeli izimpi ezintathu Fedor Khodas. Ukuze lobo bunzima yakhe kudala ngakujwayela ukuba uvele kulonyaka nokuphila engenakulibaleka. Into kuphela ukuthi ayinandaba ixhegu - isiphetho namadodana akhe. Futhi uma ababili konke ibonakala evamile, ngokwesilinganiso, ayeyile le Kuril Islands, akukho izindaba. Nokho, indodana phakathi ngeke bavume ukweyisa. He is joker efanayo uyise ... "White Dew" - ifilimu mayelana emzaneni. Comedy 1983 ikhombisa injabulo izinkinga zabantu abavamile. Isici esivelele sesimiso Umdwebo waba art Yiqiniso ngawo izenzakalo ezithile adluliswa ngokusebenzisa izinhlamvu amaphupho.
The guy lokuqala edolobhaneni
Phakathi no-1930, ngemva kwesikhathi nzima zokuphila Klim wabuyela emaphandleni, lapho usahlala uthando zakhe ezindala. Kodwa Mariana ngakwazi abe ubuhle esihle unqambothi ugandaganda umshayeli. Ngoba akukho ukukhululwa guys, kodwa bonke abalandeli bakhe yena ekuchilizela zamaqhawe uthando ondlovukayiphikiswa wendawo Nazar. Lokhu kugcina Klima buqamama, kodwa ekugcineni athole isibindi ukuze uwine inhliziyo ungenakunqotshwa Mariana, yini eyomsiza umsebenzi onzima kanye nobuqotho. comedy Old mayelana emzaneni zihlanganisa ifilimu elikhulu namaSoviet "izixaxa", eyakhishwa kudala ngo-1932.
Ezikhathini zanamuhla Lahlala glubinok kancane yesifundazwe lapho banomuzwa umoya emadolobhaneni Russian. Ukuze alungise leso simo ngendlela cinema ezisheshayo kazwelonke. comedy ekhazimulayo hhayi kuphela kuthinta merry, ukuphila entsha ye emzaneni omncane, kodwa futhi uxhuma ngesakhiwo nge elingokomlando.
Ukulandisa kule ahlekisayo mayelana emzaneni iqala ngongqimba kuze kube ama-Olympic-80. Zonke "esibuhlungu" evicted izakhamizi angaphandle kwenhloko-dolobha. Ngo Protasovo uya zamasosha ezihlukahlukene, kuhlanganise nezintatheli angaphandle, ufuna umculi wendawo Arseny. Insizwa uthola uthando wokuphila, futhi emzaneni ngokwayo ulindele omunye nezinxushunxushu enkulu ...
The best ifilimu Soviet mayelana emzaneni
Comedy "Wedding e Malinovka" uye eside ebhekwa ngezindlela indawo udumo esigabeni imidwebo yayicabangela. Ongenayo ukukhumbula lokhu band elikhanyayo 1967? A emzaneni omncane Ukrainian kuba isikhungo mobile, oludlula eduze impi yombango. Amandla njalo abezayo nabahambayo, lezigebengu thugs ubeka imitsetfo lalo. Ukuze uthole ukuhlukana kwabo ngokuphelele, umlawuli iRed Army yakhetha ezikhohlisayo imikhuba - Yarinka eziyengayo kumele badlale lomshado inkohliso Ataman ...
Mayelana into ezifana indoda eyayazi isikhathi eside. Katya Nikanorova, intombazane uhlobo ezithandayo, uhlala edolobhaneni. Wayehlale esibi nge Madoda, ngakho yena amaphupho isikhulu yangempela. Ingabe ikhona? Uma podselyaetsya wezilwane nesizotha uPawulu Dezhkin, uhlangabezana ukuhlukana ethandekayo. Kancane kancane, laba omakhelwane ome njengeqanda kukhona esiseduzane nomunye ... "Wena Nikanorova isakhamuzi" - uhlobo kanye ifilimu elikhanyayo Soviet mayelana emzaneni. Comedy ezithinta imizwelo yabantu kanye nobudlelwane, kokuqinisekisa ukuthi uma ukholwa ngempela iphupho zizogcwaliseka.
Lokhu umi emaphethelweni esigodi Zomhlaba kungenziwa ebizwa uNkulunkulu wedolobha ukhohlwe. It is zihlukaniswa abakhileyo nabanomusa funny. Basuke benamandla izindaba sokuphela olusondelayo emhlabeni bese unquma ukuthi sekuyisikhathi banelise izinkanuko zabo secret. Kusukela manje, awayona namahloni ukuveza imizwa, ukwenza izinto kungaba izolo namahloni. Ukuphela walumhlaba uyeza. Ukuphila kuyaqhubeka. Amabhola of eccentrics wendawo ufuna izindlela ukuqala azikhohlwe ngokuphelele izono zethu ... Umdwebo fantasy motif "Sakaza off" ingena isilinganiso "Okuhamba phambili kwamahlaya yesimanje mayelana emzaneni."
Futhi kungani laphila esibi esifundazweni Russian? Hero "Village ahlekisayo" Kostya Pyshkin libhekisela ngokunembile lokhu. Ukuze zonke charm yakhe, akakwazi ukuphila usuku ngaphandle adventure. Ukwehlukahluka kwezimangaliso izinkinga futhi inqubo kokuhlupheka ekukhathaza lezifula ukungakhululeki okuthile umkakhe Gala. Kodwa lokho ongakwenza othembekile? ngeke nesineke zayo zesifazane isikhathi esingakanani? Ngo odlulayo Pyshkina ubukeka tycoon abacebile, lawo ngokushesha okungenazinkinga ngu Galina. Lizoba isinqumo esinzima: umuntu ongamazi ocebile noma isiphukuphuku, kodwa namanje yakhe? Mini-chungechunge 2009, njengabanye amahlaya amaningi mayelana emzaneni, wabutha inani izinkanyezi lokuqala ebhayisikobho kazwelonke. Le filimu inkanyezi Marat Bashar, Olesya Zheleznyak, Andrei Noskov, Maria Golubkina.
Isifundazwe has imithetho yayo siqu
Gorelkovo - hhayi nje emzaneni. It has isiteshi sethelevishini ayo, futhi ngicabangela ubuso oyinhloko le ntatheli Zina Zhuravlev. Uma uthatha off indaba mayelana inkomo zasekhaya Musa, nokunye bamangala abantu bendawo, umbiko ithunyelwa mncintiswano lesifunda. Ukuze uthole ukwazi ngalokhu endaweni ethule yenhloko-dolobha iza umethuli Ilya Voronin. Le ndoda, kusukela osukwini lokuqala ukubukela zonke charm ekuphileni kwezakhamuzi: i-passport yakhe badla inkomo, kanye nosomabhizinisi bendawo wanquma ukubonisa isimo sabo. Nokho u-Eliya ngeke uphonse ithawula, kokunquma ukuhlala Gorelkove izinsuku ezimbalwa ... Esinye mini-chungechunge, senziwe 2011, ubalwa abe "ahlekisayo Modern mayelana emzaneni." Umdwebo abacebileyo babeka: Konstantin Kryukov, Nina Usatova, Nina Ruslanova, uVladimir Ilyin, ULyudmila Svitova.
Besisa - isihluthulelo senjabulo
Lapho uLisa nomyeni bakhe abahlukanisile, wanquma ukuthumela ngesikhathi le ndodana encane ukuze ugogo wakhe kule ndawo. Ukuhlukana nendodana yakhe esalibele, futhi ngokushesha yonke into lusizi. Sonke lesi sikhathi, Dennis wathola ulimi olufanayo ne isizukulwane "emuva". Wabuye ukuze ugogo ne Umkhulu kwaba umqondo impilo entsha. Ngenxa yokuthi abathathi ekujaheni ukunikeza umzukulu wakhe umama shiftless. Kodwa uLisa nenkani ngeke ashona. Khona-ke uyise ekhuphuka nge uhlelo olusha: abakufunayo umnumzana walapha owayengumbonisi ngizolahlekelwe ephethwe ukuze nginqobe Lisa, bese wayengeke ukubuyela edolobheni ...
A comedy mayelana emzaneni (Russia) "ne'er-do umakoti" sigcwalisa uhlu izithombe iziqondiso kubhekwe. Yiqiniso, alupheli. cinema Russian nge imvamisa isihlobo libhekisela isihloko, isikhathi ngasinye kunilethele injabulo labo ezibukelini okungelayo leli injabulo inhliziyo ihlala impilo yasemaphandleni.
Dollar Tree kanjani ukubheka ukuba babe acebile?
Ukuphila Single. Uwusizo noma uyingozi?